Shirkii Maamul usamaynta Jubbaland oo markale dib u dhac ku yimid
Home Somali News Shirkii Maamul usamaynta Jubbaland oo markale dib u dhac ku yimid
Waxaa markale dib udhac ku yimid dadaal maalmahaan loogu jiray maamul usamaynta Jubbaland, kadib markii uu manta baaqday shir ka furmi lahaa magaalada Kismaayo.
Qaar kamid ah masuuliyiinta ku howlan maamul usamaynta Jubbaland, ayaa warbaahinta u sheegay in sababta keentay baaqashada shirkaan ay tahay kadib markii ay kazoo qayb gali waayeen masuuliyiin katirsan doowlada Federaalka Soomaaliya oo shirka lagu casuumay.
Gudoomiyaha gudiga farsamada ee maamul usamaynta gobolada Jubooyinka ayaa ka dhawaajiyay in shir ka furmi lahaa Kismaayo uu hakad ku yimid kadib markii ay kazoo qayb gali waayeen masuuliyiin katirsan doowlada Soomaaliya, oo iyagu lagu casuumay shirka.
Maxamed Ibraahim, oo ah gudoomiyaha gudiga maamul usamaynta Jobooyinka ayaa warbaahinta u sheegay in madaxda doowlada Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha iyo Ra’iisulwasaaraha dalka ay udireen warqad codsi ah kuna aadan ineey kazoo qayb galaan shirka laakiin aysan ilaa iyo hada ka helin wax jawaab ah.
Shalay ilaa iyo manta ayaa magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayay qabanqaabada shirka maamul usamaynta gobolada Jubooyinka, waxaana ciriiri uu kajiray hoteelada iyo goobaha laysugu imaado, waxaana jirtay ergooyin farabadan kuwaasoo ka kala imaanayay gobolada jubooyinka.